तुलसीपुरमा अनलाईन कक्षालाई विशेष फोकस गरेका छौँ « Tulsipur Khabar
तुलसीपुरमा अनलाईन कक्षालाई विशेष फोकस गरेका छौँ
तुलसीपुर, ९ भदौ । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएको दुई महिना वितेको छ । कोरोना माहामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसंगै दाङमा गएको बैशाख ९ गतेदेखी बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खुल्छन ,अझै निश्चित छैन ।तर सरकारले बालबालिकाहरुलाई बैकल्पिक शिक्षा मार्फत पठनपाठन गराउने उद्देश्यका साथ विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा संन्चालन गरेका छन् । यद्यपी अनलाईन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सवै क्षेत्रमा ईन्टरनेट र प्रविधिको पहुच नहुदा कतिपय विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षाबाट बन्चित भएका छन् भने केहि विद्यार्थी अझै विद्यालय भर्ना समेत हुन सकेका छैनन ।यसै सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत चक्र भण्डारी संग शैक्षिक गतिविधिका बारेमा अनलाईनका सहसम्पादक लक्ष्मण विश्वकर्माले कुराकानी गर्नु भएको छ।सारांश -सम्पादक
१. कोरोना माहामारीले गर्दा विद्यालय बन्द छन् । सरकारले बैकल्पिक शिक्षा पनि संचालन गर्न भनेको छ । तुलसीपुर क्षेत्रमा कसरी पढाई भईरहेको छ ?
धन्यावाद । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कोभिडको माहामारीले गर्दा उत्पन्न भएको संकटको बेला सिकाईलाई सहजीकरण गर्नका लागी विभिन्न वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका नुमनाहरुलाई अगाडी बढाई रहेको छ । जस अन्र्तगत विगतको वर्षमा जस्तै यसवर्ष पनि हामीले अनलाईन कक्षालाई निरन्तरता दिदै यो वर्ष अझ जटिल अवस्था भएकाले विशेषगरी अनलाईन कक्षालाई जोड दिएका छौ ।
त्यसैले तुलसीपुर क्षेत्रका २३ वटै माध्यामिक विद्यालयहरुले कक्षा ८ देखी १२ सम्म अनलाईन कक्षा नियमित रुपमा संचालन गदै आएका छन् । यस्तै चार वटा आधारभुत विद्यालयले पनि कक्षा ६ देखी आठ सम्म अनलाईन कक्षा संचालन गदै आएका छन् । यो एउटा बैकल्पिक शिक्षा पद्धती हो । यस्तै अर्को दोस्रो माध्यमको रुपमा चाहि सरकारले ल्याएको निति फोन मार्फत पनि शिक्षण सिकाई सहजीकरण संचालन गर्ने उद्देश्य हो । सोहि अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कक्षा चार देखी १२ सम्म अध्ययनरत बालबालिकाहरुका लागी १३ हजार सात सय ६५ वटा सियुजी सिम मार्फत पनि अहिले पठनपाठन भईरहेको छ ।
लक्षित विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क रुपमा सिमकार्ड वितरण गरी फोन मार्फत पढाई संचालन भईरहेको छ । यस्तैगरी तुलसीपुर क्षेत्रमा स्वध्ययन मार्फत पनि पढाई सुरुवात भएको छ । जसमा चाहि हामीले छ हजार स्वध्ययन सामग्री छपाई गरी वितरण गरेका छौ । यसबाट पनि सिक्षण सिकाई सहजीकरण अघि बढेको छ ।यसरी हामीले यो माहामारीको समयमा विभिन्न बैकल्पिक विधिहरु अपनाएर पठनपाठनलाई अघि बढाएका छौ ।
२. नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महिना वितिसकेको छ । अहिले सम्म सवै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको अवस्था छ त ?
गत असार महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो । तर पनि कोभिडको संक्रमण माहामारी अथवा संक्रमणको जोखिम बढ्दै थियो । तै पनि हामीले विभिन्न सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया मार्फत बैकल्पिक शिक्षाको माध्यम वा बैकल्पिक विधि मार्फत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरुवात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । किनकी हामीले पाठ्यपुस्तक चाही गत आर्थिक वर्ष भित्र नै वितरण गरीसक्नु पर्ने , त्यसपछि छात्राबृत्ति पनि दिईसक्नु पर्ने त्यस्ता कारणले गर्दा खाजा पनि गत वर्षको दिनु पर्ने भएकाले विद्यार्थीहरुको तथ्याङक अद्यावधिक गर्ने काम चाहि लगभग सकिएको अवस्था छ ।
तथापी संस्थागत विद्यालयहरुको हक भने अहिले सम्म ३० देखी ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको हकमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु भर्ना भएको अवस्था छ । अब झन्डै २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थीहरु भर्ना हुन बाँकी छन् । यो सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा धेरै जसो बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भईसक्नु भएको छ । सोहि आधारमा पाठ्यपुस्तक समेत वितरण भईसकेको छ ।
३. विद्यालय भर्ना हुन छुटेका बालबालिकाहरुको सवालमा के हुन्छ ?
भर्ना हुन बाँकी रहेका बालबालिकाहरुलाई म तपार्ईको मिडिया मार्फत के अपिल गर्न चाहान्छु भने अझै पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र बालबालिकाहरुलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक संख्याको आधारमा विद्यालयमा रकम समेत पठाई सकेका छौ । सोहि अनुसार विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक समेत खरिद गरीसकेका छन् । त्यसकारणले गर्दा विद्यालयमा भर्ना हुन बाँकी रहेका बालबालिकाहरु छिटो भन्दा छिटो भर्ना हुनु प¥यो । अनलाईन कक्षा संचालन भईरहेको छ । सिकाई सहजीकरणमा सहभागी हुन म सवैमा अपिल गर्न चाहान्छु ।
४.सरकारको निति निशुल्क शिक्षा भन्ने छ । तर पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क देखी अन्य अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाईन्छ नी ?
सविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरीसकेपछि शिक्षा पुर्ण रुपमा माध्यामिक तह सम्म निशुल्क भन्ने छ । तथापी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर क्षेत्रका गत वर्ष देखी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ गदेखी ५ सम्म पुर्ण रुपमा निशुल्क गरेको थियो । साथै चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा आठ सम्म कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिईकन विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कुनै प्रकारको परिक्षाको बाहानामा होस वा खेल अथवा कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसका लागी प्रर्याप्त बजेट व्यवस्थापन समेत भएको छ । तथापी सविधानले परिकल्पना गरेको माध्यामिक तह सम्मको निशुल्क शिक्षा भन्ने कुरा अहिले हामी संग प्रर्याप्त रुपमा शिक्षक दरबन्दी अभाव भएको हुदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र अझै ८ वटा विद्यालयमा अनुमति प्राप्त शिक्षक भएको र स्वीकृति दरबन्दी कम भएकाले हामीलाई समस्या र अप्ठेरो परेको छ । त्यस कारण सविधानले परिकल्पना गरे अनुसार हामी त्यो मर्मलाई स्वीकार गर्ने कुरालाई क्रमश सुधार गर्ने तर्फ प्रतिबद्ध छौ । त्यसकारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्वंयम नगरप्रमुख ज्यु समेत सचेत भएकाले निशुल्क शिक्षालाई आगामी दिनमा शतप्रतिशत लागु गर्ने प्रयासमा हामी लाग्नेछौ ।
५.विद्यार्थी भर्ना दर कस्तो अहिले ? कोरोना संकटका कारण निजि विद्यालय छोड्ने क्रम बढ्यो भन्ने पनि छ ? के त्यस्तो भएको छ र ।
हामीले तुलसीपुर क्षेत्रमा विगत चार वर्ष देखीको तथ्याङक हेर्ने हो भने पछिल्नो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर उकालो लागेको छ । तर अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने निजि विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने दर बढि नै छ । तर कोरोना संक्रमणको कारणले त नभनौ तर पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा कुनै शुल्क तिर्नु पैदन तर निजि विद्यालयहरुमा शुल्क तिर्नु पर्छ त्यो भएर पनि अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा आफना बालबालिकाहरु भर्ना गरिदिने अवस्था छ ।
कोरोना माहामारीले गर्दा आम्दानी घटेपछि निजि विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । र अर्को कुरा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि पछिल्नो समय शैक्षिक गुणस्तर सुधारोन्मुख भएकाले पनि विद्यार्थीहरुको आर्कषण बढेको हो ।
६ .कोरोना माहामारी गत वर्ष देखी नै सुरु भएको हो । विगतमा पनि बालबालिकाहरुले नियमित रुपमा विद्यालयमा पुगेर पठनपाठन गर्न पाएनन ।त्यसकारण विगतलाई केलाउदै यस वर्ष विद्यार्थीहरुको पढाईका लागी कुनै नयाँ योजनाहरु छन् ?
गत वर्ष पनि हामीले कोरोना माहामारीका कारण विद्यालय बन्द हुदा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन गर्नका लागी अनलाईन कक्षा नै संचालन गरेका थियौँ । तर त्यतिवेला यो अनलाई कक्षालाई त्यति जोड दिएका थिएनौँ ।किन भने त्यति बेलाको तथ्याङकले पनि के भन्थ्यो भने लगभग १२ प्रतिशत बालबालिकाहरु प्रविधिको पहुँचमा छन् भन्ने देखाउँथ्यो । त्यसकारणले गर्दा हामीले अध्ययन गरेको तथ्याङकलाई मध्यनजर गदै यो वर्ष पनि अनलाईन कक्षा संगंसंगै स्वध्ययनलाई निरन्तरता दिएका छौ ।
सोहि अनुसार स्वध्ययन सामग्री मार्फत सिकाई सहजीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौ । कक्षा एक देखी सात सम्मका झन्डै छ हजार बढि विद्यार्थीहरु स्वध्ययन सामग्री समेत वितरण गरेका छौ । जसले गर्दा अभिभावकहरुको सहयोगमा बालबालिकाहरुले अध्ययन गदै आउनु भएको छ । एउटा यो वर्ष नयाँ भनेको सियुजी फोन मार्फत सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया । यो गत वर्ष नगरेको र यो वर्ष नयाँ अभ्यास हो ।
तुलसीपुर क्षेत्रका चार कक्षा देखी १२ कक्षा सम्म अध्ययनरत बालबालिकाहरुका लागी निशुल्क रुपमा सिम उपलब्ध गराएका छौ । झन्डै १४ हजार विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय मार्फत सियुजी सिम वितरण गरिएको छ । यसको माध्यमबाट पनि पठनपाठन भईरहेको छ । यो सिममा असिमित भ्वाईसकल, एसएमएस र आठ जिवी सम्मको डाटा प्याक सुविधा लिन सक्छन् । त्यस्तैगरी निशुल्क रुपमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक कुराहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरु सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया मार्फत शिक्षा लिन सक्नेछन् ।
अर्को कुरा विगतको वर्षमा छ वटा विद्यालयमा मात्रै अनलाईन कक्षा संचालन गर्न सकिएको थियो भने यो वर्ष माध्यामिक तहका सवै विद्यालयमा ईन्टरनेटका सुविधा पुगेको छ भने यस वर्ष आधारभुत विद्यालय ५१ वटामा ईन्टरनेट विस्तारका लागी भनेर प्रत्येक विद्यालयमा १२ हजार रुपैयाका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसले गर्दा पनि अब थप सहज हुने भएको छ । यस्तै अर्को नयाँ भने यस वर्ष हामीले घरदैलो अभियान पनि संचालन गरेका छौ ।प्राथमिक तहका शिक्षकहरुले आफनो कार्ययोजना बनाएर अभिभावकहरुको घरघरमा पुगेर विद्यार्थीहरुलाई सिकाउने र उनीहरुको बारेमा जानकारी लिने काम भईरहेको छ । यो पनि एउटा नमुना अभ्यास हामीले गरेका छौ ।
७ .तपाईहरुले थुप्रै विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्नु भएको रहिछ । तर यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएनभएको बारे अनुगमनलाई कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
हामीले अनुगमनलाई पनि साथसाथै जोडेका छौ । त्यो भन्दा पहिले शिक्षण सिकाई सहजीकरणलाई कसरी संचालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने लगाएतका विषयमा सुरुमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना समेत गरेका थियौँ । त्यतिबेला शिक्षकहरुलाई अनलाईन कक्षा कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा धेरै छलफल गरी सिकाईएको छ । त्यस्तैगरी मासीक प्रतिवेदन समेत माग गरेका छौ भने हामी आफैले पनि अनुगमन र नियमन गदै आएका छौ ।
यस उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको केन्द्र बनाउने रणनिति तथा परिकल्पना रहेको छ । सोहि अनुरुप यहाका अभिभावक शिक्षित हुनु भयो भने, विद्यार्थीहरु पनि सचेत हुनुभयो र गुरुवर्गहरु पनि सचेत तथा सक्रिय भए मात्रै हामीले परिकल्पना अनुसार नगरलाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ।
त्यसकारण यो हाम्रो परिकल्पना र रणनितिलाई सफल बनाउनका लागी आम अभिभावक, विद्यार्थी, गुरुवर्ग ,शिक्षाप्रेमी सवैमा हातमालो गर्न आह्वान गर्न चाहान्छु । यो संकटको बेला बैकपल्कि शिक्षा सिकाई सहजीकरणमा सहभागी भईदिन सवै बालबालिकाहरुलाई अपिल गर्दछु । र अन्तमा मेरो विचार राख्न दिएकोमा तपाईको मिडिया र तपाईलाई धन्यावाद ज्ञापन गर्दछु । धन्यावाद ।